Godina Matakkalitti rakkoon muudate gareen juuntaa ijaarsa Hidha Haaromsaa gufachiisuuf humnoota badii waliin qinda’ee kan kakaseedha-Letenaal Jeneraal Asiraat Denneeroo – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Godina Matakkalitti rakkoon muudate gareen juuntaa ijaarsa Hidha Haaromsaa gufachiisuuf humnoota badii waliin qinda’ee kan kakaseedha-Letenaal Jeneraal Asiraat Denneeroo
On Mar 9, 2021 120
Finfinnee, Gurraandhala 30, 2013 (FBC)- Rakkoon Nageenyaa naannoo Beenishaanguul Gumuuz godina Matakkalitti muudatee gareen juuntaa ijaarsa Hidha Haaromsaa Guddichaa gufachiisuuf humnoota badii waliin qinda’uun kan kakasee ta’uu qindeessaa olaanaan Komaand Poostii godinicha Leetanaal Jeneraal Asiraat Denneeroon himaniiru.
Jirattoonni aanaa Guubaa naannichaatti nageenyaa waarawaa buusuuf tattaaffii akka taasisaan mirkaneessaniiru.
Godinachatti koree qindaa’aan hundeeffamee jiraattoota waliin mari’ateera.
Jiraattoonni godinichaas marii gaggeeffamerratti nageenyaa naannichaa deebisuuf ga’eesaanii akka ba’atan mirkaneessaniiru.
Korichi erga hundeeffamee booda nageenyi aaniichaa fooyya’uu ibsamera.
Qindeessaa olaanaan Komaand Poostii godina Matakkal Leetanaal Jeneraal Asiraat Denneeroon, mootummaan rakkoo naannichaa furuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru.
Godinicha gara misoomaatti deebisuuf taattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru.
Kutaa magaalaa Araadaatti piroojaktoonni baasii Birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona…
Paarkoota qindeessa oomisha qonnaaf humna dhiyeessuuf waliigalteen mallattaa’e
Hojiin Suphaa Dhagaa Dhaabbii Xiyyaa xummuramuun daawwattootaaf banaa ta’e
Kutaa magaalaa Araadaatti piroojaktoonni baasii Birrii…
Paarkoota qindeessa oomisha qonnaaf humna dhiyeessuuf…
Oduu biyya keessaa6439